Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ebe kacha mma n'ụwa ịzụta ebe ezumike ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọmụmụ ihe ọhụrụ tụlere ebe ndị a ma ama n'ụwa niile n'ihe ndị dị ka ihe a ga-eme, oke ego, ọnụego mpụ na ihu igwe mpaghara.
E meziri akara nha nha n'ozuzu ya wee bụrụ obodo ọ bụla.
Ebe 10 kacha mma ịzụta ụlọ ezumike gburugburu ụwa
n'usoro Ebe Ihe a ga-eme kwa mmadụ 10,000 Ụlọ oriri na ọṅụṅụ kwa mmadụ 10,000 Akara akara mpụ Nkezi ọnụ ahịa obibi maka ezinụlọ dị mmadụ anọ (USD) kwa ọnwa Nkezi ọnụ ahịa ihe onwunwe kwa m2 (USD) Nkezi okpomọkụ (˚C) Nkezi mmiri ozuzo kwa ọnwa (mm) Ngụkọta akara/10
1 Venice, Ịtali 358 2,628 31.63 $ 3,691 $ 4,930 13.1 64.2 6.92
2 Paphos, Saịprọs 115 1,511 28.38 $ 2,560 $ 1,837 19.2 32.2 6.91
6 Corfu, Gris 74 1,322 19.45 $ 2,910 $ 1,647 17.2 85.0 6.28
9 Larnaca, Saịprọs 45 707 29.69 $ 2,834 $ 1,565 19.5 31.7 6.19
Dị ka isi obodo Veneto nke ugwu Ịtali, a na-akpọ Venice aha mbụ ebe ezumike n'ụwa. Amara maka ewu ewu n'elu ọdọ mmiri nke ihe karịrị 100 obere agwaetiti dị n'ikpere mmiri nke Adriatic, isi ihe mere o ji bụrụ ebe ọ na-aga ebe mbụ bụ nnukwu ihe a ga-eme na ebe iri nri na ihe ọṅụṅụ n'ime obere mpaghara ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ebe ezumike ebe ndị njem nlegharị anya dị ole na ole, ebe ị nwere ike imikpu onwe gị na ndị obodo, Paphos dị na Saịprọs nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma. Obodo ahụ nwere ọkwa nke abụọ n'ihi ihu igwe Mediterenian ya, yana nkezi okpomọkụ kwa afọ nke 19.2˚C, yana so na ebe ndị a na-akwụ ụgwọ dị ọnụ ala enyochala, yana ọnụ ahịa ụlọ kwa square mita nke $1,837.
Abu Dhabi weere ọnọdụ nke atọ n'ọkwa ahụ, na-enwetakwa akara mpụ kacha nta nke ebe niile nyochara, dị mkpa maka ndị na-ele ahụ iru ala na nchekwa n'ụlọ ha pụọ ​​​​n'ebe obibi anya dị ka ihe dị oke mkpa.
Antalya, Turkey bụ ebe na-eri kacha ala kwa ọnwa nke $1,339 maka ezinụlọ mmadụ anọ. Antalya bụkwa ebe a na-aga na ọnụ ahịa ihe onwunwe kacha ala bụ $730 kwa square mita.
Maka ndị na-efe anyanwụ, Las Vegas bụ ebe mmiri ozuzo kacha dị ntakịrị nke naanị 8.9mm na-ada kwa ọnwa. Ebe nwoke na Maldives nwere okpomọkụ kachasị elu nke 28.5˚C.